Vantage Calendar, imwe khalendari yemahara kwenguva yakati IPhone nhau
Vantage Calendar, imwe khalendari yakasununguka kwenguva yakati
Takatanga neMuvhuro nekuzivisa nezve chishandiso chitsva chekarenda icho kwenguva yakati wandei chinogona kutorwa pasi mahara. Tiri kutaura nezve akasiyana manyorerwo chikumbiro, umo zvakajairika pamwedzi maonero anopa nzira yezuva nezuva yekutarisa iyo inorasika kumashure. Vantage Calendar ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye3,99 euros, asi kwenguva yakati rebei tinogona kuikanda mahara. Ichi chishandiso hachipi isu zvakafanana mabasa atinogona kuwana mune mamwe mashandiro anotibvumidza isu kushandisa kendari yedu nenzira yakasununguka uye yakapusa senge maKarenda 5 kana Anoshamisa, asi isu tiri vashandisi vasingawanzo kunyora zvinhu zvakawanda mairi, dhizaini yeVantage Chalenda inogona isu isu yatinoda kuishandisa seye default application.
Pakutanga zvinogona kutitorera zvishoma kujairira asi nekufamba kwenguva nzira yazvinotiratidza isu kugadzwa pakarenda zvinoda kuziva pamwe nekurova pamwe chete tiyeuchidze nezvezvikwereti zveSaga Wars saga. Vantage Calendar inotipa iyo inoonekwa khalendari, iyo zvakare ine mawidgets enzvimbo yekuzivisa. Tinogona kuzvijairira nemhando dzakasiyana nematanho, kuwedzera pakukwanisa kuwedzera zvitambi zvakasiyana kuti uwane nekukurumidza musangano kana chiyeuchidzo chekarenda yedu.
Vantage Calendar inotipa zvakasiyana mu-app kutenga kuti ugadzirise iwo mavara uye madingindira, asi neaya ayo anotipa isu natively, mune zvinopfuura zvakakwana. Pfungwa isina kunaka yandinowana mune ichi chishandiso ndeyekuti kuve nekugona kuwedzera zvakagadzwa mukarenda uye kuti zvinodzokororwa zuva nezuva, vhiki nevhiki, pamwedzi kana pagore isu tinofanirwa kupfuura nepabhokisi uye kubhadhara iyo 1,99 euros izvo zvinoda kuvhura iyi sarudzo. Kunyangwe kana isu tisingade kuibhadhara, tinogona kuwedzera kudomwa kwerudzi urwu kuburikidza neyekuzvarwa iOS application uye nekudaro chengetedza iyo 1,99 euros, yakanyanyisa kuvhura iri basa rinowanikwa pane ese makarenda, kusanganisira mahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Vantage Calendar, imwe khalendari yakasununguka kwenguva yakati
Iwo matatu akanakisa email mamaneja eIOS